Saingy noho ny fihibohana, izay naharitra 14 andro, maro amin` ireo katita no tsy nanokatra ny kahieny… Mba tsy ho variana na hilalao fotsiny ireo mpianatra dia samy nandray ny andraikitra mifanandrify amin` izany ireo sekoly. Sekoly iray etsy Malaza Ampitatafika, ohatra, dia nanomana enti-mody mba hanaovan` ireo mpianatra fanazarana. “Hevitra mety izany, satria variana mijery “télé” sy milalao fotsiny ny zaza ao an-trano” hoy ireo ray aman-dreny sendra anay.Misy sekoly hafa ihany koa nandefa ny enti-mody amin’ny alalan’ny e-mail an’ireo ray aman-dreny. Ny fidirana mianatra kosa dia amin` ny 20 aprily izao raha ny tetiandrom-pampianarana hatrany saingy miankina amin` ny fepetra raisin` ny fanjakana ihany izany, hoy ny tompon` ny sekoly. Raha toa ka mianatra avy hatrany aorian` io daty voalaza io dia tonga dia miatrika fanadinana telo volana faharoa (second trimestre) ireo mpianatra, satria tao anatin` ireo herinandro fihibohana mihitsy izany no tokony natao, mialohan` ny hidirana amin` ny telo volana fahatelo.